သိပ္ပံပညာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအမွန်းတင်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
သိပ္ပံပညာမှာ – Why do we exist?
ကျွန်တော်တို့ ဘာဖြစ်လို့ တည်ရှိနေရလည်း ??
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက တော်တော်လေး အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ အဓိက မေးခွန်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်။
ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အထင်အရှား ရှင်းပြပြီးသားပါပဲ။ မသိလို့လိုချင် လိုချင်လို့ပြုလုပ် ပြုလုပ်တော့ ရရှိပြီး ဖြစ်ပေါ်နေရတာပဲဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ။ အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရဆိုတာလည်း ရှိတယ်လေ — မသိလို့ လုပ်မိလုပ်ရာ လျှောက်လုပ်ကြတာပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ သံသရာ လည်ကြတာပေါ့။
သံသရာလည်တာကို ဒုက္ခလို့သိတော့ ဒုက္ခမလိုချင်ဘူး၊ မလိုချင်တော့ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ဘူး၊ မလုပ်တော့လည်း မရတော့ဘူးပေါ့၊ မရတော့လည်း ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း ပြီးသွားတာပဲ။ ဒါက တရားတော်မှာ ရှိနေတာပဲ။
သိပ္ပံကတော့ Why do we exist? ဆိုတာကို သိပ်ကိုရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်ပြီးတော့ မေးခွန်းထုတ်နေကြတာ၊ ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မွန်းသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဒါကတော့ အဖြေရှိပြီးသားပါ။ အဖြေကို သိပ္ပံနည်းနဲ့မရလို့သာပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းနဲ့ကတော့ရတယ်။ သိပ္ပံနည်း ဆိုတာကတော့ ပြင်ပကိုသုတေသန လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ ကိရိယာ တန်ဆာပလာနဲ့ တိုင်းတဲ့သဘောပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းကတော့ ပြင်ပမလိုက်ဘဲ၊ ကိုယ့်အတွင်းရဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်တွေ၊ မှားနေတဲ့ အရာတွေကို ငြင်းဖျက်ရင်းနဲ့ ငြင်းဖျက်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို တည်ဆောက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒီနှစ်ခု ကွာတာပါပဲ။ သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ကွာဟတာတွေလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts. Bookmark the permalink.